ယုန်လေး၏ MTV နှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု - Yangon Nation News
အဆိုတော်ယုန်လေး၏ MTV ထုတ်ဖော်ပြသမူနှင့်
တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု နဲ့အတူ အချိန်နှင့်တပြေးညီ အာဏာသက်ရောက်မူ ရှိစေခြင်း
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကြညာစာတမ်း အပိုဒ် (၁၉) ၏ ဖွင့်ဆိုချက်
ဖြင့် ဆောင်းပါးကို စလိုက်ပါရစေ။
လူတိုင်းတွင် လွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆပိုင်ခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာဖွင့်ဟဖော်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်၊
အဆိုပါအခွင့်အရေးများ၌ အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ လွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆနိုင်ခွင့်
ပါဝင်သည့်အပြင် နိုင်ငံနယ်နမိတ်များကိုထောက်ထားစရာမလိုဘဲ သတင်းအကြောင်း
အရာနှင့်သဘောတရားများကို တနည်းနည်း ဖြင့်လွတ်လပ်စွာ ရှာယူဆည်းပူးနိုင်ခွင့်နှင့် ဝေငှဖြန့်ချီ ခွင့်တို့လည်းပါဝင်သည်။
(၂) မိမိအခွင့်အရေးများနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များကို သုံးစွဲရာတွင် လူတိုင်းသည် အခြားသူများ၏ အခွင့်အရေးများနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များကို အသိအမှတ်ပြု၍ ရိုသေလေးစားစေရန်အလို့ငှာလည်းကောင်း၊
ဒီမိုကရေစီ ကျင့်သုံးသော လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ကိုယ်ကျင့်တရားအပြင်၊ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းရေးအတွက်
တရားမျှတစွာ ကျင့်ဆောင်ရန် အလို့ငှာလည်းကောင်း၊
ဥပဒေက ပြဌာန်းထားသည့် ချုပ်ချယ်မူများ ဖြင့်သာ ကန့်သတ်ခြင်းခံရမည်။
ထိုသို့သော လွတ်လပ်မူ များကို ကုလသမဂ္ဂမှ…
ဥပဒေ၏ ရှေ့မှောက်တွင် တန်းတူညီမျှရေး၊
ဥပဒေချိုးဖောက်သူများကို ထိရောက်စွာအရေးယူရေး၊စသည်တို့ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ အာဏာသက်ရောက်မူရှိစေခြင်း၊ အပြစ်ကျုးလွန်သူတို့အပေါ် တိုင်တန်းနိုင်သော ယန္တရားထားရှိခြင်း၊ အားထားထိုက်သော လွတ်လပ်စွာ တရားစီရင်ရေးစနစ်ထားရှိခြင်းတို့ပါဝင်သည်၊
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈) တွင်…..
ပုဒ်မ(၃၅၄) နိုင်ငံသားတိုင်းသည် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေး သို့မဟုတ် ပြည်သူတို့၏ ကိုယ်ကျင့်တရားအကျိုးငှာ ပြဌာန်းထားသည့် ဥပဒေများနှင့် မဆန့်ကျင်လျှင် အောက်ပါအခွင့်အရေးများကိုလွတ်လပ်စွာသုံးစွဲဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်၊
(က) မိမိ၏ ယုံကြည်ချက်၊ထင်မြင်ယူဆချက်များကို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြဆိုခွင့်၊ရေးသားဖြန့်ဝေခွင့်၊
သို့သော်လည်း ယုန်လေး၏ MTV ရုပ်သံ ထုတ်ဖော်ပြသမူ ဖြစ်စဉ်ပါ ပြကွက်များသည်
နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသား များ၏ လုံခြုံရေးကို ပျက်ရယ်ပြုနေတာကိုတွေ့နေရတဲ့အပြင် ၊
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ၂၀၀၈ ပုဒ်မ (၄၇) ၏ ဖွင့်ဆိုပြဌာန်းချက်ဖြစ်သည့်
ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ဥပဒေပြုမှု အခွင့်အာဏာကိုသော်လည်းကောင်း၊
ဟူ၍ ဖွင့်ဆိုပြဌာန်းထားပြီး၊ တည်ဆဲ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တည်ဆဲ ဥပဒေများနှင့်အညီ အစိုးရခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည့် နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ၏ အသက် အန္တရာယ်နှင့်လုံခြုံရေးကို ထိပါးစေသော ပြကွက်များသည် နိုင်ငံတော်ကို ခြိမ်းခြောက်စေသော ၊
နိုင်ငံတော် ကိုလုပ်ကြံနိုင်စေမည့် ရေလာမြောင်းပေး ဆန်ဆန် ထုတ်ဖော်မှုပြကွက်များဖြစ်နေပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်တို့၏ ပြကွက် သရုပ်ဆောင်မှု
တိုင်းသည် လူအများ အထူးသဖြင့် လူငယ်၊လူရွယ်များအား စိတ်ကူးယဉ်ဆန်စေကာ အတုယူမှုများနှင့်
တိုင်းပြည်ကို မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေလိုသူများမှလည်း အခြေအနေ အခင်းအကျင်းတစ်ခု
ဖော်ပြီး လုပ်ဆောင်လာနိုင်မှုကိုမိမိတို့နိုင်ငံမှ တာဝန်ရှိသူ အကြီးအကဲများက သတိထား
သုံးသပ်ကြစေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် ယခုလို အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အကြို ကာလမှာ အလွန်ပင် သတိချပ် ကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ၂၀၀၈..
ပုဒ်မ(၂၉၁) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်သည့် တပ်မတော်သားများ၏ လုပ်ငန်းသဘာဝသည်
ထူးခြားမှုရှိသည့်အလျောက် တပ်မတော်သားများအတွက် တပ်မတော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရမည်။
ပုဒ်မ(၂၉၂) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွင့်ဝင်များ၏ ထူးခြားသည့် လုပ်ငန်းသဘာဝအရ ယင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍
ဆိုလိုတဲ့သဘောက တပ်မတော်သားများအတွက် တပ်မတော် အက်ဥပဒေ၊တပ်မတော် နည်းဥပဒေများကို
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈) ၏ ဖွင့်ဆို
ပြဌာန်းထားချက်အရ တပ်မတော်သည်နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။
အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှ ပြည်သူလူထု၏ မဲဆန္ဒများပေးကာ ရွေးချယ်မှုဖြင့်
တက်လာသော နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်နှင့် အစိုးရခေါင်းဆောင်မဟုတ်ပေ ၊
နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်သော တပ်မတော်၏ အကြီးအကဲတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကလည်း တပ်မတော် အစိုးရမှ ရေးသားဖွင့် ဆိုပြဌာန်းထားသော
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈) အရ စာရေးသူမှ ရေးသားတင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သို့ပါသော အကြောင်းအချက် များကို မိမိတို့နိုင်ငံသားအားလုံးမှ ထောက်ရူ
fb ပေါ်မှာ ငြင်းခုန်ရန်စပွားမူများကို ဆင်ခြင်သုံးသပ် လျှော့ချ ကြ ဖို့လိုအပ်လာပြီး၊
အစိုးရတာဝန် ရှိသူများကလည်း ယုန်လေး၏ MTV ရုပ်သံဖော်ပြမူအား ဥပဒေ ၊နည်းဥပဒေ၊များနှင့်အညီ အမိန့် ညွှန်ကြားချက်များ
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယခု ယုန်လေး၏ ရုပ်သံဖော်ပြမှုကို မသိ ကျိုးကျင် ပြုလိုက်ပါက နောက်နောင်တွင် ဒီထက် ပိုမိုဆိုးရွားစေမည်ံ ထုတ်လွှင့်ဖော်ပြမှုများကို အဖက်ဖက်သော လူတိုင်းက လုပ်ဆောင်လာကြပါလိမ့်မယ်။
ထိုကဲ့သို့လို ဖော်ပြ ထုတ်လွှင့်မှုများမှတဆင့် အစွန်းရောက်သူများနှင့် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သူများက တဆင့် တိုးလုပ်ဆောင်
မိမိတို့ နိုင်ငံအတွက် အန္တရာယ် တစ်ခုပင်မဟုတ်ပါလား ?
အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲသည်လွတ်လပ်၍ တရားမျှတမှုများရှိရမည့် အပြင်
မဲဆန္ဒပေးကြမည့် ပြည်သူအားလုံး နှင့် နိုင်ငံတော် ကြီး သည် လုံခြုံ၊ အန္တရာယ်ကင်း
ရှင်းစွာ ပြီးမြောက် အောင်မြင်စေရန် တာဝန်အရှိဆုံး အဖွဲ့အစည်းသည် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်ရမည့် အဓိက တာဝန်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရ၏ တာဝန်မှာ နိုင်ငံတော်ကြီးနှင့် နိုင်ငံသား ပြည်သူ ပြည်သားအားလုံးကို
ကုလသမဂ္ဂ၏ လူ့အခွင့်အရေးကြညာစာတမ်း – အပိုဒ်(၂၁/၃) ပြည်သူ ပြည်သားတို့၏ ဆန္ဒသည် အုပ်ချုပ်မူအာဏာ၏ အခြေခံဖြစ်ရမည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈) –
အခန်း(၁) – နိုင်ငံတော်အခြေခံမူများ…..
ပုဒ်မ(၄) နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာ သည်နိုင်ငံသားများထံမှ ဆင်းသက်ပြီး နိုင်ငံတော်တစ်ဝန်းလုံး၌တည်သည်။
ဟုဖွင့်ဆိုထားပါသောကြောင့် လက်ရှိ တည်ဆဲရွေးချယ်ခံအစိုးရ နှင့် အစိုးရခေါင်းဆောင်များသည် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများအား ကိုယ်စားပြုပါတယ်၊
တပ်မတော်၏ အဓိကတာဝန်မှာ နိုင်ငံတော်အား ကာကွယ်ရန်ဖြစ်ပြီး –
ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့သည် ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။
ယုန်လေး၏ ထုတ်လွှင့်မှုရုပ်သံအား အများပြည်သူ မှ ထင်ယောင် ထင်မှားဖြစ်စေသော အချက်တစ်ခုကိုလည်းရေးသား
တည်ဆဲ ဥပဒေများနှင့်အညီ ဖြစ်သည့် ရွေးချယ်ခံအစိုးရ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည့်
နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံနှင့် ယှဉ်တွဲကာ ဦးညွှတ် အလေးပြုခံနေသော
ဦးသန်းဌေးသည် ရွေးချယ်ခံ အစိုးရခေါင်းဆောင် မဟုတ်သလို နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလည်းမဟုတ်ပါ။
(၂၀၂၀) အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက် ရွေးချယ် ယှပြိင်မည့် နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခု၏ ဥက္ကဌသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဤပြကွက်သည် တိုင်းသူ ပြည်သားများအား ထင်ယောင် ထင်မှား ဖြစ်စေပါတယ်၊
ရိုးသားသော တိုင်းရင်းသား ပြည်သူ ၊နိုင်ငံသားများ၏ အိပ်ကပ်ထဲမှ
မဲကို မသိနိုးနား နိူက်ယူမှုသာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိတို့ နိုင်ငံသားများ၏ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ရိုးသားစွာ
ယုံကြည်မှုအပေါ် media အလွဲသုံးစားပြုမူ မြောက်ပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားများ အားလုံးပါဝင်မှလည်း ပြည့်စုံလာပါမယ်။
သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့် ယနေ့ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ရွေးကောက်ပွဲ အကြိုကာလတွင်
တရားဥပဒေစိုးမိုး၍ ဖြစ်လာနိုင်မည့် အန္တရာယ် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ကာကွယ်နိုင်စေရန်အတွက် ယုန်လေး ၏ ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မူအား သေသေချာချာ သုံးသပ်ကာ –
နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများနှင့် အညီ အမိန့် ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်နိုင်ပါစေကြောင်း…..
မိမိတို့ နိုင်ငံနှင့် မိမိတို့ ပြည်သူ ပြည်သားများ ဘေးအန္တရာယ် များကင်းရှင်းစေခြင်းအကျိုးငှာ ရေးသား ဖော်ပြ
………. ( 5.8.2020)……….
နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှာ နှစ်ကာလရှည်ကြာစွာ အမြစ်တွယ်ရှင်သန်နေတဲ့ အဂတိ လိုက်စားမှုပြဿနာများကို အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးစိတ်ဆန္ဒ ပြင်းပြစွာဖြင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေ ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတပြော